Firefox 76 inouya nekuvandudzwa kweLockwise, WebGL uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Iyo vhezheni nyowani yeakakurumbira Firefox 76 webhu bhurawuza ichangoburwa, pamwe nenhamba mbozhanhare yeFirefox 68.8 yeiyo Android chikuva. Uye zvakare, inogadziriswazve yakagadzirwa kune yayo LTS vhezheni 68.8.0.
Pamusoro pehunyanzvi uye kugadzirisa bug, Firefox 76 yakagadzirisa 22 kudzvinyirira, yeiwo gumi (CVE-10-2020, CVE-12387-2020 uye 12388 pasi peCVE-8-2020) yakaratidzirwa seyakaomarara uye inogona kugona kuita kodhi yakaipa.
Kutambura CVE-2020-12388 - Inokutendera kuti ubve pasandbox nharaunda yekuzviparadzanisa muWindows nekunyengedza mikana yekuwana. Iyo CVE-2020-12387 kunetsekana kwakabatana neye memory block kufona yakatoburitswa (Use-after-free) pakupera kweWebhu Mushandi. CVE-2020-12395 inosanganisa ndangariro nyaya, senge buffer inoputika.
1 Chii chitsva muFirefox 76?
2 Maitiro ekuisa kana kugadzirisa iyo nyowani vhezheni yeFirefox 76 paLinux?
Chii chitsva muFirefox 76?
Mune iyi vhezheni itsva, kuvandudzwa kweiyo Lockwise system yekuwedzera-kuunzwa inosanganisirwa mubrowser uye mune yambiro parizvino yakapihwa maaccount akachengetedzwa ane chekuita nemasayiti akambobira kana kuburitsa ruzivo uye ndeapi ikozvino inoratidza yambiro nezve mapassword akakanganiswa anoshandiswa pane akasiyana masosi. Kana imwe yemaakaunzi akachengetedzwa ikaonekwa mune yekudonha kweyechokwadi uye mushandisi akashandisazve password imwechete kune mamwe masaiti, ivo vanozokurudzirwa kuti vashandure password.
Imwe shanduko iyo inoiswa mune iyi nyowani vhezheni yeFirefox, iri kuwedzera huwandu hwemasaiti anoshandiswa otomatiki kugadzirwa kwepassword kuchengeteka kana uchizadza mafomu ekunyoresa. Pakutanga, zano rakaratidzwa kuratidza rakasimba password chete kana paine minda ine hunhu "autocomplete = nyowani-password".
Zvakare akawedzera "HTTPS chete" yekushandisa modhi, iyo yakaremara nekutadza. Iyo yekutsiva inoitwa zvese padanho rezvinhu zvakatakurwa mumapeji uye kana ichinge yapinda mubara rekero. Kana kuyedza ku kuwana https kukero yakapinda mubhawa rekero inopera munguva yekupedzisira, mushandisi anoratidzwa peji rine kukanganisa, imomo muchave nebhatani rekuita chikumbiro kuburikidza http: //. Panyaya yekundikana kana kurodha pasi kuburikidza nechuma zviwanikwa webhu kuvandudza.
Zvakare zvakasimbiswa muFirefox 76 ndiyo kugona kushandura nekukurumidza pakati pemufananidzo-mu-pikicha vhidhiyo kuratidza uye yakazara-skrini kuratidza. Mushandisi anogona kudzikisira vhidhiyo muhwindo diki uye panguva imwechete kuita rimwe basa, kunyangwe mune kumwe kunyorera uye pamatafura chaiwo.
Basa rakaitwa kuwedzera kuoneka nekureruka kwekushanda pamwe nekero bar, kana tebhu nyowani ichivhurwa, mumvuri wakakomberedza munda nebara rekero waderedzwa, uyezve mabhukumaki bar akawedzeredzwa zvishoma kuti awedzere nzvimbo ye Iyo inodzvanya nzvimbo pane yekubata skrini.
Munharaunda dzeWayland-dzakavakirwa, neiyo itsva WebGL backend, iko kukwanisa kumhanyisa kudhizaini kwehadhi yeVP9 uye mamwe mavhidhiyo mafomati anotsigirwa neFirefox inoitwa. Iko kumhanyisa kunopihwa uchishandisa iyo VA-API (Vhidhiyo Yekuwedzera API) uye FFmpegDataDecoder iyo mune yazvino vhezheni, chete H.264 rutsigiro ndiyo yakaitwa (kudzora kuiswa kweiyo yekumhanyisa munenge: config, ma parameter anofanira kuiswa "Widget. wayland-dmabuf-webgl.enabled "uye" widget.wayland-dmabuf-vaapi.enabled ")
Maitiro ekuisa kana kugadzirisa iyo nyowani vhezheni yeFirefox 76 paLinux?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Firefox 76 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweLockwise, WebGL nezvimwe
Maitiro ekugadzira bootable Windows 10 USB kubva Kubuntu pasina kuisa chero chinhu